बिचरा धमला ! लाखौँ अगाढि खाए गा ली (भिडियो) – Nepali Taja Khabar
बिचरा धमला ! लाखौँ अगाढि खाए गा ली (भिडियो)
ऋषी धमलालाई लाखौँ जनताको अघि गा ली गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद वि घ टन गरेपछि अनौपचारीक रुपमा वि भा जन भएको नेकपाको एउटा समुह अहिले आ न्दो ल नमा छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालको समुह आ न्दो ल नमा उत्रिएको छ ।
बुधवार सो समुहले काठमाडौमा वि रो ध सभा गरेको छ । यो पटकको सभामा पनि नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ चर्चामा आएका छन् ।
अघिल्लो पटकको सभामा पनि मञ्चमै झो क्कि एको उनको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भा इर ल भएको थियो । यो पटक उनले पत्रकार ऋषी धमलालाई मञ्चवाटै थ र्का ए का छन् ।
उनले भाषण गरिरहँदा पत्रकार दिर्घामा केही हल् ला हुन्छ । उनले पत्रकार साथीहरु त्यहाँ हल् ला नगर्नुस भन्दै आग्रह गर्छन । तर पनि हल् ला शान्त हुँदैन । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
उनी अलि उ ग्र हुँदै पत्रकार साथीहरु तपाईहरु चुप लाग्नुस् हल् ला नगर्नुस भन्छन् । त्यस पछि उनले ऋषी धमलाको नाम नै तोकेर ऋषी धमला तपाई हल् ला नगर्नु, त्यहाँ अर्को कार्यक्रम नगर्नुस चुप लाग्नुस् भन्दै मञ्चवाटै थ र्का उँ छन् ।
भिडियो तल छ
उनले भन्छन्, हामी यहाँ सभा सञ्चालन गरिराखेका छौं तपाईरु त्यहाँ चुप लाग्दिनुस् सुन्नस् ऋषी धमला जी तपाई त्यहाँ अर्को कार्यक्रम संचालन नगर्नु तपाई चुप लाग्नुस् । उहाँले राम्रै काम गर्नु भएको थियो ।
आमसभामा जनतासंग अन्तरवार्ता लिनु भएको छ । तर अहिले होइन पछि लिन म अनुरोध गर्दछु उनले भने । त्यती भनेर उनले फेरी आफ्नो भाषण जारी राखे ।
नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केपी ओली ठ गी ध न्दा मा लागेको बताएका छन् । बुधबार ओलीको प्र ति गा मी कदमको वि रो धमा आयोजित बृ ह त सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले ओलीले माधव नेपाल र आफु लगायतका धेरै नेताहरुलाई झु ठ कुरा गरेर र ढाँटेर गल् ती गरेको बताए ।
उनले ओलीको प्र ति गा मी कदम पछिको अवस्था सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशहरुले समेत हेरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले न्याय, संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्ने विश्वास रहेको बताए ।
‘लाखौं जनताको उपस्थिति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले पनि राम्रोसँग देख्नुभएको छ । जनताले के चाहेका छन्, यो जनभावनालाई हेर्नुभएको छ र ढिलो नगरी लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा फैसला दिनुहुनेछ’ प्रचण्डको भनाई छ ।
उनले जनताको भावनाविपरित केही काम गरियो भने दू र्भा ग्य हुने चे ता व नी पनि दिए । ‘शान्तिपूर्ण आ न्दो ल न वि द्रो ह मा गयो भने के हुन्छ ?’ प्रचण्डको प्रश्न छ ।
उनले आफुहरु कानुनी राज्यको मान्यतामा दृढ रहेको भन्दै त्यसैका लागि नयाँ संविधान बनाइएको बताए । ‘नेपालको लागि कस्तो संविधान बनायो भने राजनीतिक स्थयित्व र जनताको हित हुन्छ भनेर बनाइएको हो । यदि त्यसो भएन भने आँ धी आउँछ हुरी चल्छ’ प्रचण्डको चे ता व नी छ ।
प्रचण्डले ओलीलाई चे ता व नी दिँदै भने, ‘म केपीलाई भन्छु–अर्को पटक १० लाख जनता लिएर सिंहदरवार र बालुवाटार घे र्नु नपरोस् ।’
उनले राममन्दिर र अयोध्या बनाउने हो भने अनुसन्धान गरेर गर्न ओलीलाई चु नौ ती दिँदै भने, ‘तपाईंका नाटक तीन वर्षमा मैले चिने ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
पुरातात्विक अनुसन्धान गराउनुस्, मेरो विरोध छैन तर, तपाईंले ठुलो गल्ती गर्नुभयो केपीजी ।’ उनले गलत व्यक्तिका हातमा नेतृत्व गएको भन्दै अब त्यस्तो हुन नदिने बताए ।
उनले केपीले भूमिसम्बन्धी आयोग बनाएर ष ड्य न्त्र गरेपनि त्यसले माखो न मा र्ने बताए । ‘म तपाईंहरुको अगाडि फेरि एक पटक प्रतिज्ञा, संकल्प फेरि दोहोर्याउन चाहान्छु ।
मेरो जीवन र मेरो समकक्षी नेताको जीवनमा यो देशलाई सुन्दर, शान्त र विशाल, विकसित र सम्मृद्ध बनाउनुबाहेक हाम्रो कुनै सपना छँदैछैन, हुनै सक्दैन’ प्रचण्डको भनाई छ । उनले बाँकी रहेको जीवन प्रधानमन्त्री र कुर्सीका लागि नभई जनताका लागि समर्पित गर्ने बताए ।
उनले केपी ओलीले निर्वाचन आयोगलाई ध म्की दिएको भन्दै आयोगका केही मानिस अलि ड रा एको बताए । ‘तर लक्षण निर्वाचन आयोगले राम्रो देखाएको छैन ।
७० प्रतिशत हाम्रो पक्षमा छ तर ओलीले ध म्क्या उँ दैमा तपाईंहरुको पनि खुट्टी देखियो । ढाई सय वर्ष पुरानो सा मन्ती सासन फाल्ने केपी ओली होइन, खेलाची नठाने हुन्छ ।
देशलाई दु ख दिने काम कसैले गर्नुहुदैन । निर्वाचन आयोग खुट्टा न क माउ, ठगी धन्दाको पछि नलाग’ प्रचण्डले आयोगलाई आग्रह गरे ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
छोरी मानेकी सपनाको गो.प्य फो,टो आफ्नो मोवाइलमा किन राखे विनयजंगले ? ‘देखाइदिउँ !’ भन्दै दिए चे.ता.वनी (भिडियो हेर्नुस्)
छोराले अ श्ली ल भिडियो हे र्दा आमाबुवाले पनि क ठो र स जा य भो ग्नु पर्‍यो, शिक्षकलाई स मे त स जा य